Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Xaaladda goobt ayaa hadda degan, waxaana la qaadey dhaawacyada, iyadoo Ciidamo boolis ah ay tageen, kuwaasoo sameeyay howlgallo baaritaanno ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax is-miidaamin ah oo Maanta ka dhacay magaaladda Muqdisho, ee Caasimadda Soomaaliya.
Goobjooge la hadlay Keydmedia Online ayaa sheegay in qaraxa uu fuliyay qof xirnaa Jaakadaha ismiidaaminta, kaasoo isku qarxiyay Goob Suuq ah, oo sidoo kale laga raaco baabuurt oo ku taalla Ex-control Afgooye, galbeedka Muqdisho.
Jugta qaraxa ayaa laga maqlay meel fog oo katirsan Caasimadda, waxaana goobta laga qaadey meydadka labo qof oo shacab ah iyo sideed kale, oo dhaawacyo kala duwan uu soo gaarey, kuwaasoo la dhigay Isbitaallada.
Booliska ayaa xiray wadada oo hakad geliyay gaadiidka, iyadoo ay sameeyeen baaritaanno aan cidna loo soo qaban, maadaama qofkii weerarka ka dambeeyay uu isaguna naftiisa ku waayay qaraxa, oo ka dhacay meel lagu iibiyo Kalluunka.
Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa oo illaa hadda la ogeyn bartilmaameedkiisa, balse waxaa loo maleynayaa Kooxda Al-Shabaab inay ka dambeyso maadaama horey weeraro noocan ah u sheegatay.